Izindaba - Amanye Amathiphu Nge-WPC
Imikhiqizo ye-Wood plastic composite (WPC) ijabulela izinzuzo zombili zokhuni nezinto ze-polymer, kepha ayinayo kusuka emaphutheni abo.Izinto zeWPC ngamandla aphezulu, zivimbela ukubola, ukumelana nesimo sezulu, ukushibilika ukumelana.Ingasetshenziselwa ukwakheka komhlaba, ingadi, izindlu Ngamakhono amaningi amahle, abantu abaningi basebenzisa izinto ze-WPC ukuhlobisa indawo yabo.Kodwa uyawazi amanye amathiphu womkhiqizo we-WPC?
1. Amanye amakhasimende afuna kakhulu ukuthola i-WPC decking yawo uma efaka i-oda.Ungaphelelwa isineke kangaka mngani wami othandekayo, ifektri ye-WPC idinga isikhathi sokukhiqiza i-WPC decking yakho eyinhlanganisela. ngokushesha, Uma impahla eluhlaza kukhishwe ngokushesha okukhulu, izakhiwo zemishini ye- WPC phansi Kodwa akuyona inhloso, ihamba kancane futhi ikhwalithi engcono.
2. Njengoba sazi, imikhiqizo yethu ye-WPC ivuselelwa kabusha ngokuphelele futhi inemvelo.So mhlawumbe ikhasimende elithile lizokhathazeka ngekhwalithi yekhwalithi yethu.Sizibophezele kuwe ukuthi asisoze sasebenzisa izinto ezivuselelwa kabusha.Okuhlelekile kwethu konke, sizosebenzisa izinto ezintsha futhi sizohlola okokusebenza lapho sithenga okokusebenza.Nje ngale ndlela, singaqiniseka ukuthi ikhwalithi enhle yokuhlobisa i-WPC yethu eyinhlanganisela.
3. Inkinga ejwayelekile kakhulu yemikhiqizo ye-WPC iyaphela.Njengoba isimo sezulu esikhethekile, njengokukhanya kwelanga okuphezulu okwenza yonke imikhiqizo kube lula ukulahlekelwa umbala wayo.Uma izwe lakho linesimo esifanayo, udinga ukutshela ifektri yethu.Singangeza ukwengeza ukumelana ne-UV ngaphezulu, kuzokwenza ukuthi amabhodi we-WPC anciphe ukumelana.Noma ngabe yisiphi isimo, imikhiqizo yethu ingagcina umbala okungenani iminyaka engu-5-10. Leli yikhono elihle kakhulu.
Ngakho-ke kuthiwani ngokufunza kwakho ngokuhlobisa i-WPC yethu ngokuchaza kwami? Uma ungakwazi ukulinda ukuthola ukugcotshwa kwakho kokhuni lweplastiki, shesha uxhumane nathi!
WPC decking esiyinhlanganisela, WPC decking ongaphandle, WPC decking phansi, Ukuhlobisa i-WPC yangaphandle, ngokhuni plastic decking esiyinhlanganisela, WPC phansi,